Gregôrio IX - Wikipedia
I Gregôrio IX na Gregoara IX no papa faha-178 izay nitarika ny Fiangonana katôlika tamin' ny taona 1227 hatramin' ny taona 1241, taorian' ny naha evekan' i Ostia azy tamin' ny taona 1206 hatramin' ny 1227. Izy no nandimby ny papa Hônôrio III, nandova ny lovam-pampianatan' i Gregôrio VII (na Gregoara VII) sy ny an' ny papa Inôkentio III izy. Teraka tamin' ny taona 1145 izy sady nitondra ny anarana hoe Ugolino di Anagni na Ugolino dei conti di Segni, ary maty tamin' ny 22 Aogositra 1241 tao Rôma.
Atao hoe Grégoire IX izy amin' ny teny frantsay, Gregory IX amin' ny teny anglisy, Gregorio IX amin' ny teny italiana ary Gregorius IX amin' ny teny latina.
Nananamarika ny fotoana naha papa azy ny asa fanaovana fehezan-dalàna sy ny fananganana ny Inkizisiona tamin' ny taona 1231 (izay nankininy tamin' ireo frera mpangataka, dia ny Fransiskana sy ny Dôminikana) ary ny ady tamin' ny emperoran' ny Empira Masina (i Friedrich II, noho ny fahataràn' ny fiaingan' ny kroazada fahenina) sy tamin' ny mpanjakan' i Frantsa sy ny mpanjakan' i Angletera ary tamin' ny mponina tao Rôma (izy nokomy taminy ka nahatonga azy hisesy tany any Anagni).
I Konrad von Marburg
Noho ny fangatahan' ilay mpanao inkizisiona Konrad von Marburg (frantsay: Conrad de Marbourg) niasa tany Alemaina dia namoaka ny didy fanenjehana ny mpamosavy izy tamin' ny taona 1233 (didy izay nitondra ny lohateny hoe Vox in Rama) izay miresaka momba ny sabatan' ny mpamosavy sy ny fivavahana amin' ny demony. Amin' io didy io dia mihevitra ny saka sy ny sahona ho faharongavan' ny Devoly ho nofo. Indraidray ny papa Gregôrio IX nanenjika ny Jiosy (tsy fampadoavana trosa amin' ny Jiosy, fanagiazana ny literatiora jiosy sy ny Talmoda) ary indraindray izy niaro azy ireo (noho ny fisavorovoron' ny vahoaka tao Frantsa, ohatra).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gregôrio_IX&oldid=1002053"
Dernière modification le 8 Martsa 2021, à 08:23
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 08:23 ity pejy ity.